सचिवालयका व्यक्तिमा अहमता बढ्यो : बिडारी (भिडियोसहित)
काठमाडाैं । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सरकारले गरेको लकडाउनमा पर्याप्त तयारी नपुगेको बताउनुभएको छ । जनताले सरकारलाई सहयोग गरेपनि सरकारले यसको सदुपयोग गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । मुलुकको सत्तामा
‘सरकारसँगै छ, चिन्तित नहोऔं’
‘कोभिड–१९ को एक जुट भएर सामाना गरौँ, सरकार तपाईहरुसँगै छ चिन्तित नहोऔंं’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई केहीबेरमा डिस्जार्च गरिँदै
फाइल तस्बिर काठमाडौं । दोस्रो पटक मृगौला प्रयारोपण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई केहीबेरमा गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली फागुन १९ देखि त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा उपचारत हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई
प्रधानमन्त्रीको डिस्चार्ज केही दिन लम्बिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको डिस्चार्ज केही दिन लम्बिने भएको छ । मृगौला प्रयारोपणको लागि अस्पताल जानुअघि प्रधानमन्त्रीले एक साताभित्रै फर्कने बताउनु भएको थियो । अस्पतालबाट सोमबारसम्म पर्कने प्रधानमन्त्रीको योजना
प्रधानमन्त्री ओली खाना खाने र हिडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री शुक्रबार खाना खाने र सामान्य हिडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण तेस्रो
प्रधानमन्त्री ओलीलाई झोलिलो पदार्थ खुवाइयो
काठमाडौं । मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार भएको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई आज दिउँसो
प्रधानमन्त्रीको उपचारमा १६ डाक्टर, कसलाई के छ जिम्मेवारी ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणमा १६ चिकित्सक सक्रिय छन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई ‘मृगौला प्रत्यारोपण शल्यक्रिया (अप्रेसन), मृगौला प्रत्यारोपण चिकित्सा र ‘एनेस्पेसिया तथा क्रिटिकल कियर गरी ३ समूहमा
कसरी भइररहेको छ प्रधानमन्त्रीको अप्रेसन ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । महाराजगंजस्थित त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओली शल्यक्रिया (अप्रेसन )भइरहेको छ । दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्न लाग्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई अप्रेसको लागि बिहान १० बजे नै थिएटरमा लगिएको
प्रधानमन्त्रीको मृगौला प्रत्यारोपण शुरू
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण कार्य शुरु भएको छ । दोस्रो पटक मृगौलाप्रत्यारोपण्को लागि प्रधानमन्त्री सोमबार साँझ त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो । आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणपछि आज
आधुनिक पारुहाङ र सुम्निमाको जोडी (फाेटाे फिचर)
‘आयात-निर्यातकाे सन्तुलन कायम गर्न अनलाइन प्रणाली’
‘प्रधानमन्त्री ओलीको विचार राजतन्त्रको भन्दा बढी निर्लज्ज’